Mgbalị nke anọ: Xiaomi malite Android 10 ọzọ maka Mi A3 | Gam akporosis
Xiaomi nọ na ya ihe nke anọ na ngwanrọ gam akporo 10 na Mi A3 Onye izizi nke China bidoro izizi OTA maka ngwaọrụ na njedebe nke February, ma, kemgbe ahụ, ọ gosipụtala nsogbu dị iche iche na nkeji ụfọdụ.
O doro anya na, n'oge na ngwaọrụ na-na-anọ nke femụwe ngwugwu na kwuru os. Nke a emeela ka otu onye ọrụ mara na Reddit, onye meghere eri nke o bipụtara nseta ihuenyo nke interface ahụ, nke, dị ka ekwuru, na-agbazi nnabata akara mkpịsị aka mgbe ebuliri ngwaọrụ ahụ na EIS mechara yie na-arụ ọrụ, n'etiti ihe ndi ozo.
Enweghị nkọwa ndị ọzọ gbasara mmelite ọhụrụ a na gam akporo 10 maka Xiaomi Mi A3. Companylọ ọrụ ahụ ekwughi okwu banyere okwu a ma kpughere ozi ọ bụla gbasara ya na ụbọchị ndị a. Agbanyeghị, na-ekpe ikpe site na nseta ihuenyo, nke bụ nke anyị debere n'okpuru, anyị kwubiri na ọ na-agbasa nke nta nke nta, yabụ ọ nwere ike bụrụ na ngalaba gị anatabeghị ya, ọ bụrụ na ị nwere ya.
N'aka nke ọzọ, ọ ga-ekwe omume na a na-enye ya naanị yana na nkeji nke gosipụtara nsogbu arụmọrụ yana mmelite ọ bụla gara aga nke gam akporo 10.
Ọhụrụ gam akporo 10 melite maka Xiaomi Mi A3
Ihe ngwugwu ahu nwere ihe dika 32 MB, nke bụ ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere mmelite 1.33GB nke bịara n'oge ikpeazụ ma bụrụ nke doro anya maka ihe ọhụụ ọhụụ achọpụtara. Nha a na-egosi na mmezi ahụhụ bụ isi ike ya, ya mere ọ ga - abụ, karịa ihe ọ bụla, ihe nkedo na - agbakwunye njikarịcha na mmụba n'ọkwa nchekwa na nzuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mgbalị nke anọ: Xiaomi malitere Android 10 maka Mi A3
Joimer ruiz dijo
Na Eprel 27, a gbanwere Mi Xiaomi MI A3 na gam akporo 10, mana ụfọdụ ngwa Google dịka foto na ụlọ ahịa na-amalitegharị n'ime sekọnd ka emepere ha. Fọdụ ngwa ndị ọzọ na-enye m ohere ilele faịlụ dị na ekwentị m, otu ndị egwu egwu anaghị adabara ... o doro anya na ọ bụ mgbe ha gbalịrị ịgụ ihe ncheta dị n'ime ma ọ bụ nke mpụga, amaghị m ihe na-eme na ahụghị m onye ọ bụla ọzọ na-ekwu maka ya ikpe dị ka nke m, biko nyere aka ebe a: joimer710@hotmail.com
Zaghachi Joimer Ruiz
The Doogee X95 bụ ihe ọhụrụ dị ala nke emepere emepe nwere atụmatụ adịchaghị yana ọnụ ahịa nke erughị euro 60